Ny ankamaroan'ny tranonkala dia miorina miaraka amin'ny TMI. Vonona ny hiloka aho fa misy toerana ambony 5 tadiavin'ny olona rehetra amin'ny tranokala mahazatra ho fanampin'ny pejy fandraisana ankehitriny:
Niara-niasa tamina mpivady roa tato ho ato aho ary nanindry ny volan'ny fampahalalana azon'izy ireo tao amin'ny tranonkalany. Ny namana sy mpiara-miasa, Kyle Lacy, no nanoratra an'izany kalitao, serivisy ary fahaizana manokana tsy mampaninona izany. Marina izy - indrindra amin'ny tranokala.
Tena manantena olona iray hanao dokambarotra zavatra hafa ve ianao? Angamba “Eny, manam-pahaizana izahay ary manao asa tsara amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa… saingy somary tsy ampy ny kalitaonay. Vonona ny hanao sonia aminay? ”
Notaritiko foana ny tranonkala iray ho toy ny sonia eo alohan'ny fivarotana anao. Mila volavolaina tsara, fohy ary mivantana izy io… avelao ny olona hijanona izay hahafantatra izay ataonao. Tokony ho amin'ny toerana tsara (SEO) ihany koa izy io, saingy lahatsoratra bilaogy hafa izany. Raha manana tsanganana 25 amin'ny vokatra sy serivisy rehetra natolotr'izy ireo ny takelaka famantarana eo ivelan'ny fivarotanao, hovakinao ve izy ireo ary hiditra? Sa hiala ianao?
Ny vintana dia, miaraka amina tranokala lehibe dia lehibe ianao, manala ny fikafika lehibe nefa tsy manana fotoana hivarotana azy ireo. Raha te-hanisy tsipiriany momba ny endri-javatra sy ny tolotra omena anao ianao, izany dia fotoana mety indrindra hialana bilaogy. Raha tsy izany dia tazomy ny tranonkalanao (aka websign), madio ary amin'ny teboka. Tsy mbola nandeha tany amin'ny tranokala 100 aho ary nilaza hoe: “Wow, ity dia natao feno sy mahatalanjona tokoa!”. Fa kosa, very angamba aho… tsy hitako izay notadiaviko… dia lasa aho.
Mahatakatra ireo mpanjifako ary efa mandray soa amin'ilay paikady. Ny mpanjifa iray izao dia manana fidirana mpanjifa miaraka amina fampahalalana fanampiny an-taonina amin'ny alàlan'ny menus maromaro - saingy indray mandeha monja dia miditra ny mpanjifa. Ny iray hafa manana bilaogy hametrahan'izy ireo ny fampahalalana fanampiny rehetra. Ireo tranonkala navoakan'izy ireo dia mazava, fohy ary sariaka amin'ny fiovam-po. Izahay dia manome fampahalalana ampy ho an'ny fitarihana hirosoana bebe kokoa, saingy tsy ampy handosirana ny hafa izay mety ho vinavina tsara.
Fandanjana mitandrina. Afaka manome fampahalalana marobe amin'ny pejin-tranonkala ianao ary mbola manova olona… fa mino aho fa ny pejy tsara indrindra dia sorohina ny lisitry ny endri-javatra sy ny mombamomba azy. Izy ireo kosa dia manome fijoroana vavolombelona, ​​tombony ary valiny ho an'ny mpanjifa. Aza atao kalitao, serivisy ary fahaizana manokana. Aleo mifantoka amin'ny fanaintainana nitondra ny mpitsidika tany sy ny fomba nanampianao ny hafa hanamaivana ny fanaintainany.